လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-၂၀ လီတာဆံ့သော လည်ပင်းအထူပုလင်းပေါင်း ၁၅၀ ကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အာမခံချက်- ၁၂ လ(၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်မှု-တစ်နိုင်ငံလုံး အခမဲ့ တပ်ဆင်ပေးသည်
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAQGF150-L
3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine - VAQGF 150-L of Viet An company is the most advanced automatic filling and capping machine. Specialized for cleaning, filling and capping big neck threaded jars.
Viet An company
With the application of the most modern technology in cleaning, filling and capping water jars in the United States, the VAQGF 150-L machine will be an effective support for bottled pure water business and production facilities.
This filling and capping machine is manufactured at Viet An factory or imported from USA, Italy, Taiwan China at customers’ request.
3 IN 1 ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်-Viet An ကုမ္ပဏီရဲ့ VAQGF 150-L စက်သည် ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်ဖြစ်တယ်။ သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ ဖြည့်ပေးခြင်းနှင့် လည်ပင်းထူသောပုလင်းတွေကိုအဖုံးတပ်ဆင်ပေးခြင်းများကိုအထူးလုပ်ဆောင်ထားတယ်။
USရဲ့ခေတ်မီသောသန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ဖြည့်ပေးခြင်းနှင့်အဖုံးတပ်ပေးခြင်းနည်းပညာကြောင့်VAQGF150Lစက်သည်ရေသန့်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒီစက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သလို customer တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ USA/Italy/Thaiwan China တို့မှလည်း တင်သွင်းပါတယ်။
VAQGF 150-L3in 1 automatic filling and capping machine for big neck thread jars
This is the most advanced 3-in-1 automatic filling and capping machine on the market.
This machine is manufactured on modern technological line, meeting quality standard of ISO 9001: 2015
All components constituting the machine are genuine and of high quality. The machine has3functions:
automatic inner and outer jar cleaning, automatic jar filling and capping
Withacapacity of 150 big neck threaded jar of 20 liters per hour, model VAQGF150-L will help businesses save 3-5 employees, reduce production costs, increase competitiveness for businesses and automation in the production of bottled water.
ဒီစက်ဟာ ဈေးကွက်မှာ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးသော3In 1 ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ISO 9001:2015 စံချိန်မီတဲ့အရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစက်မှာပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးဟာ အဆင့်မြင့်ပြီး အရည်အသွေး အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ လုပ်ဆောင်ချက် ၃ ခု ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေက ပုလင်းအတွင်းအပြင် အော်တိုသန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ဖြည့်ပေးခြင်းနှင့် အဖုံးတပ်ပေးခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နာရီအတွင်းမှာ ၂၀ လီတာဆံ့တဲ့ လည်ပင်းထူပုလင်းပေါင်း ၁၅၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်တာကြောင့် VAQGF 150-L ကို သုံးခြင်းဖြင့် အလုပ်သမား ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်ထိလျှော့ချနိုင်မယ်။ ထုတ်လုပ်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်လည်း လျော့ကျစေမယ်။ စီးပွားရေး ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ မြင့်တက်လာမယ်။ ရေဘူးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့အခါလည်း အော်တိုစက်ကိရိယာကို လူအစားသုံးလာနိုင်ပါမယ်။
Benefits of using VAQGF150-L3in 1 automatic filling and capping machine for big neck thread jarsBenefits of using VAQGF150-L3in 1 automatic filling and capping machine for big neck thread jars
● Improve production capacity of bottled pure water
● Automate the production process
● Consistent with modern manufacturing trends
● Save production costs, increase competitiveness for businesses
● Ensure food safety and hygiene for big neck threaded jars of 20 liters
● Update new production technologies into bottled water production activities
● Reduce labor and cost savings
VAQGF 150-L3IN 1 လည်ပင်းထူသော ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်ကိုသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
● ရေသန့်ဘူးများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေတယ်။
● ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အော်တိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
● ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာတီထွင်မှုတွေ ပါဝင်တယ်။
● ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး စီးပွားရေး ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ တိုးလာစေတယ်။
● အစားအသောက် လုံခြုံမှုနဲ့ ၂၀ လီတာ လည်ပင်းထူပုလင်းတွေရဲ့ သန့်ရှင်းမှုတွေကို သေချာစေတယ်။
● ရေဘူးထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ရဲ့ နည်းပညာတွေ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတယ်။
● အလုပ်သမား လျှော့ချနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေတယ်။
VAQGF150-L 20L big neck threaded jar filling and capping machine with3automatic stages
Stage 1: Automatic jar cleaning20L big neck threaded jars are moved to the jar holder of the VAQGF150-L cleaning, filling and capping machine.The machine consists of:
● Jar chain conveyor system to hold the jar-head and move the jar.
● Conveyor motor system to operate the conveyor chain system.
● 304 stainless steel head booster pump system to create pressure to pump both pure water and sterilized ozone to the bottom of the jar through the washing heads.20L big neck threaded jars will be washed inside and out with pure water and sterilized ozone to make sure that the jar is clean and completely sterile before being moved to the filling heads.The whole process of cleaning the jar takes place automatically atarate of 150 jars of 20L / h.
VAQGF 150-L3IN 1 လည်ပင်းထူသော ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်ရဲ့ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သော အဆင့် ၃ ဆင့်
၂၀ လီတာဆံ့တဲ့ လည်ပင်းထူ ပုလင်းတွေကို သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ဖြည့်ခြင်းနှင့်အဖုံးတပ်ပေးခြင်းတို့လုပ်ဆောင်ပေးသော VAQGF 150-L စက်ထဲသို့ ရွှေ့ပေးရပါမယ်။
ပုလင်းတွေကို အတွဲလိုက် သယ်ယူပေးတဲ့စနစ်၊
ပုလင်းတွေကို အတွဲလိုက် သယ်ယူပေးတဲ့စနစ်ကို လည်ပတ်စေဖို့ သယ်ယူပေးတဲ့ ကိရိယာမော်တာ၊
သန့်စင်တဲ့ရေနဲ့ ပိုးသတ်ထားတဲ့ အိုဇုမ်းတွေကို ဆေးကြောပေးတဲ့အရာတွေကိုဖြတ်ပြီး ပုလင်းအောက်ခြေထိရောက်အောင် စုပ်ယူပေးဖို့ 304 အစွန်းခံ သံမဏိ ရေစုပ်ပေးတဲ့စနစ်စသဖြင့် ပါပါတယ်။
ပုလင်းတွေကို ရေသန့်နဲ့ အတွင်းအပြင် ဆေးကြောပြီး အိုဇုမ်းနဲ့ ပိုးသတ်ပေးပါတယ်။ ဒါမှ ရေမဖြည့်ခင်မှာ ပုလင်းက သန့်စင်ပြီး ပိုးသတ်ထားတာ သေချာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းပေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာ ဒီစက်ဟာ တစ်နာရီကို ၂၀ လီတာဆံ့တဲ့ဘူးပုလင်း ၁၅၀ နှုန်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နေမှာ ဖြစ်တယ်။
Stage 2: Automatic jar filling
Model VAQGF 150-L is designed with 1 filling head. This filling head is made of high quality 304 stainless steel. Operate under the pressure of 0.45-0.6 Mpa. Plumbing system to bring purified water from the source to the filling head. At the top of the filling head, there is an induction system to automatically fill the water into jars and stop filling when there are no jars. This helps to save the maximum amount of pure water.
After being filled with water, the jars will be move to the capping head for jar capping.
အဆင့် ၂: အော်တိုဖြည့်ပေးခြင်း
VAQGF 150-L ကို ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်းတစ်ခုနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီခေါင်းကို အရည်အသွေးမြင့် 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားတယ်။ 0.45-0.6 Mpa ဖိအားအောက်မှာ လုပ်ဆောင်တယ်။ ရေပိုက်စနစ်က မူလအရင်းအမြစ်က ရေသန့်တွေကို ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်းဆီသို့ ယူဆောင်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်းရဲ့ထိပ်မှာ ပုလင်းတွေရှိတဲ့အခါ လောင်းထည့်ပေးပြီး ပုလင်းတွေမရှိတဲ့အခါ အော်တို လောင်းထည့်ခြင်းကို အော်တို ရပ်တဲ့ စနစ် ပါရှိတယ်။ ထို့ကြောင့် ရေသန့်ပမာဏများများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ ရေဖြည့်ပြီးတဲ့အခါ ပုလင်းတွေကို အဖုံးပိတ်ပေးတဲ့ စက်ဆီကို ရွှေ့ရပါမယ်။
Stage 3: Automatic jar capping
Model VAQGF 150-L has 1 jar capping. When the jar is filled with water, it is transferred to the capping head, and the cap feeder tube puts the cap into the jar and the cap withapressure of 0.45-0.6 Mpa will be capped into the jar with 100% accuracy.
To ensure that the cap does not overturn during the cap feeding process, you should invest in an automatic cap feeder machine.
In addition to model VAQGF150-L, Viet An also providesalot of other automatic jar filling machines. For more information, please visit the following link: https://vietan.vn/may-chiet-rot
အဆင့် ၃: အော်တိုအဖုံးတပ်ပေးခြင်း
VAQGF 150-L မှာ အော်တို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်တစ်ခု ပါပါတယ်။ ဖြည့်ပြီးသား ပုလင်းတွေကို အဖုံးပိတ်ပေးတဲ့ စက်ခေါင်းဆီ ပို့ရမယ်။ ထို့နောက် ကုန်ကြမ်းထည့်တဲ့ ပြွန်လေးက အဖုံးကို ပုလင်းပေါ်ထားမယ်။ အဲ့ဒီနောက် 0.45-0.6 Mpa pressure အောက်မှာ ၁၀၀% မှန်ကန်မှုဖြင့် ပုလင်းတွေကို အဖုံးတပ်ဆင်ပေးမယ်။ ကုန်ကြမ်းထည့်တဲ့အခါ မှောက်ကျတာတွေမဖြစ်ဖို့ အော်တိုစက်တွေကို ဝယ်သုံးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
VAQGF 150-L အပြင် Viet An ကုမ္ပဏီမှ တခြား အော်တိုလောင်းထည့်ပေးတဲ့စက်တွေလည်း ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ အသေးစိတ် သိရှိချင်ရင်တော့ https://vietan.vn/may-chiet-rot မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
5 other automatic steps are recommended to integrate with VAQGF150-L filling machine to createafully automatic filling line
VAQGF150-L 20L big neck threaded jar filling and capping machine is an extremely modern machine. They are easily compatible with other machines to createafully automated, closed production process.
Viet An offers5recommendations for customers to select for investment.
VAQGF 150-L သည် ပြည့်စုံသော အော်တိုလောင်းဖြည့်ခြင်းလိုင်းဖြစ်ရန် အခြား အော်တိုအချက် ၅ ချက်
VAQ 150-L စက်သည် လုံးဝခေတ်မီသော စက်ဖြစ်တယ်။ ဒီစက်တွေက အော်တိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တခြားစက်တွေနဲ့ တွဲဖက်သုံးဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viet An ကုမ္ပဏီမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့အတွက် အကြုံပြုချက် ၅ ချက်ကို ပေးချင်ပါတယ်။
1. Semi- automatic inner and outer jar cleaning, decapping machine BS-1
၁။ တစ်ဝက် အော်တိုလုပ်ဆောင်သော အတွင်းအပြင်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် အဖုံးခွာခြင်းစက် (BS-1)
The BS-1 semi- automatic inner and outer jar cleaning, decapping machine isagreat solution for bottled water enterprises. Reasonable investment costs, high performance, saving labor costs.
The machine is equipped with 1 decapping head,acleaning chamber. Machine control system. The cleaning chamber hasabrush system. 304 stainless steel head booster pump system.
The machine is connected toapower source, using air pressure to remove the cap. Workers turn the jars upside down into the position to remove their caps. Click on the pedal switch mounted at the foot of the machine. Under the action of the decapping cylinder, the cap will be removed from the jar and dropped down the slide into the position where the cap will be stored for reuse. The jar, after being decapped, will be placed over the jar cleaning part. Then, the booster pump works, pumping water into the cleaning chamber, the bristles move clockwise and brush the entire body of the jar. Under the action of the brush, the jar also moves. The jar will be thoroughly washed and cleaned.
Customers can use the tap water, sewage of the RO filter system to supply BS-1 semi- automatic inner and outer jar cleaning, decapping machine to save water and costs.
ဒီစက်က ကုန်ကျစရိတ် သင့်တော်တယ်၊လုပ်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်တယ်၊အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်တေ လျှော့ချနိုင်တာကြောင့် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းချက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ စက်မှာ အခွံခွာတဲ့ ခေါင်းတစ်ခု၊သန့်ရှင်းတဲ့ အကန့်နဲ့ စက်ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်တွေ ပါဝင်တယ်။ သန့်ရှင်းရေးအကန့်မှာ brush စနစ်နဲ့ အားပြင်းတဲ့ ရေစုပ်စနစ်တွေ ပါဝင်တယ်။ စက်က အဖုံးခွာဖို့ လေဖိအားကို အသုံးပြုပြီး ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို ဆက်ထားတယ်။ အလုပ်သမားတွေက ပုလင်းအခွံခွါဖို့ နေရာမှာ ထားရမယ်။ ခြေနင်းခလုတ်ကို နင်းရမယ်။ အဲ့ဒီအခါ စက်က အခွံခွါပေးပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုဖို့ သိုလှောင်ထားတဲ့နေရာဆီ ပို့ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ အဖုံးခွါထားတဲ့ပုလင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေး အကန့်ထဲ ထည့်ရပါမယ်။ ရေစုပ်စက်က ရေတွေကို သန့်ရှင်းရေးအကန့်ထဲ စုပ်ထည့်ပြီး brush က ပုလင်းတစ်ခုလုံးကို နှံ့စပ်အောင် တိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ Brush ကြောင့် ပုလင်း လှုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပုလင်းက နှံ့နှံ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်။
Customer တွေက ရေခြွေတာဖို့ အညစ်အကြေးစစ်ထုတ်ရေကိုနစ်နဲ့ဖို့ R.O အညစ်အကြေးစစ်ထုတ်ရေကိုနစ်နဲ့ ဘုံပိုင်ရေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Technical specifications (နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 150-200
Cleaning head (သန့်ရှင်းရေးခေါင်း) 1
Electricity supply (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) 1.1kw
Pressure (Mpa) (လေဖိအား) 0,45-0,6
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 770x800x1150
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 40
2. Light inspection machine (DJ-100)
Application: Screening to see whether there are strangle objects or not
Usage: Workers will select the probability of the water jar after production through this DJ-100 light inspection machine. Under the light of the machine, workers will see if there are any abnormalities in the jars. And workers will proceed to remove unqualified jars. This helps improve the reputation of the enterprise
Application: ဘူးတွေ ပုလင်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရာဝတ္တုတွေကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုပုံ-ဒီစက်ကို အသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ အလုပ်သမားတွေက ပုလင်းတွေရဲ့ ဖြသ်နိုင်ချေကို သိရှိမှာ ဖြစ်တယ်။ အလင်းရောင်ကြောင့် ပုလင်းထဲက မူမမှန်တဲ့ အရာဝတ္တုများကို တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့် အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ပုလင်းတွေကို ဖယ်ထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လုန်ငန်းလည်ပတ်မှုကို အထောက်အကူ ပြုစေမှာ ဖြစ်တယ်။
3. Steam Membrane Shrinking Machine for Jars SK-300
(SK-300 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်)
This steam membrane shrinking machine is an essential device for businesses that produce bottled pure water.
Components: 1 boiler and 1 shrinking chamber
Operating procedure of the machine. Water is supply into the boiler, the boiler is connected toapower source to heat water up, creating steam to supply the shrinking chamber. The jars filled with water were picked up by workers to move to the SK-300 shrinking chamber. Under the heat of the steam, the membrane will be shrunk tightly to the jar. The membrane surface will be smooth without wrinkles.
ဒီစက်က ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အလွန်အရေးပါတယ်။
ပါဝက်သောအစိတ်အပိုင်းများ- ရေနွေးအိုးတစ်ခုနဲ့ shrinking အကန့်တစ်ခု
စက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကိုရေနွေးအိုးထဲထည့်ပါ။ ရေနွေးအိုးက ရေကိုအပူပေးဖို့ လျှပ်စစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားပြီး shrinking အကန့်ထဲမှာ ရေနွေးငွေ့တွေ ဖန်တီးပေးတယ်။ ရေဖြည့်ပြီးသား ပုလင်းတွေကို အလုပ်သမားတွေက Sk-300ဆီကို ရွှေ့ပေးရမယ်။ ရေနွေးငွေ့အပူရှိန်ကြောင့် အမြှေးပါးက ပုလင်းထဲမှာ ရှုံ့နေမှာ ဖြစ်တယ်။ အမြှေးပါးမျက်နှာပြင်က ရှုံ့တွနေခြင်းရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
Specifications of the steam membrane shrinking machine (SK-300)
( SK-300 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 100-300
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) 18
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 1500x550x800
4. Heat membrane shrinking machine SK-300E
SK-300E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
Model SK-300E uses heat to shrink membrane.
Components: Heating chamber and shrinking chamber.
The machine is connected toapower source, the heating chamber will supply heat to the shrinking chamber. The polymer membranes placed on the whole body of the jar by workers will go through the shrinking chamber. Under the heat of the shrinking chamber, temperature deforms the membrane, covering the entire body of the jar smoothly.
With extremely intelligent design, the machine can automatically adjust the temperature and keepastable temperature for the shrinking chamber. Therefore, the quality of shrinking membrane is always beautiful and smooth
SK-300 E က အမြှေးပါးကိုရှုံ့ဖို့ အပူကို သုံးပါတယ်။
စက်က ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို ဆက်ထားပြီး အပူပေးတဲ့အကန့်က shrinking အကန့်ဆီကို အပူလွှတ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ အလုပ်သမားတွေက မော်လီကျူးအမြှေးပါးလေးတွေကို ပုလင်းထဲထည့်ပြီး shrinking အကန့်ကို ဖြတ်စေမှာဖြစ်တယ်။အပူကြောင့် အမြှေးပါးရဲ့ပုံစံကို ပြောင်းစေပြီး ပုလင်းတစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။
စက်က အပူချိန်ကို အော်တိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ shrinking အကန့်ထဲမှာ တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်ရဲ့ အရည်အသွေးက အမြဲကောင်းမွန်နေတာ ဖြစ်တယ်။
Technical specifications ofaheat membrane shrinking machine
SK-300E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား)
5. Stainless steel conveyor (for jars containing water) CSSG4
အစွန်းခံ သံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ (CSSG4)
To connect the automatic stages together and to transport the jar after it has been filled, you should invest in installing this 304 stainless steel conveyor system.
With dimensions of4meters in length and 29 cm in width. The loading capacity of stainless steel conveyor is very high, which can transport jars fast, with lifespan of over 20 years
အော်တိုအဆင့်တွေကို အတူတကွ လည်ပတ်စေဖို့နဲ့ ဖြည့်ပြီးသားပုလင်းတွေကို ရွှေ့ဖို့ ဒီစက်ကို တပ်ဆင်သင့်တယ်။
အလျား ၄ မိတာနဲ့ အနံ ၂၉ စင်တီမီတာရှိပါတယ်။ ပုလင်းတွေကို မြန်မြန်ပို့ဆေါင်နိုင်ပြီး အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြာရှည်ခံပါတယ်။
Technical specifications of Stainless steel conveyor
CSSG-4 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 4000x290
VAQGF150-L automatic big neck threaded jar filling and capping machine with modern production models
We are living in an age of industrialization and modernization. With the strong development of the industry. Therefore, the application of scientific and technological advances to production isavital element of any enterprises in the new era. VAQGF150-L automatic cleaning, filling and capping machine integrates3automatic functions, operating continuously without labor. This jar filling and capping machine will help bottled beverage manufacturers automate production to keep up with the modern trend
VAQGF 150-L3IN 1 လည်ပင်းထူသော ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်၏ ခေတ်မီသော ထုတ်လုပ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့က ခေတ့မီတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်မှာ နေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်။ စက်ရုံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ application က သိပ္ပံနည်းပညာအရ အလွန် အရေးပါလာတယ်။ VAQGF 150-L က အဆင့် ၃ ဆင့်ကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး အလုပ်သမားတွေမပါဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်က အချိုရည်လုပ်ငန်းတွေအတွက် ခေတ်မီတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
With the old technology line of semi-automatic machines, the process of cleaning, filling and capping the jars requiresalot of labor and the productivity is very low.
The 3-in-1 VAQGF150-L machine isacompletely different story. The machine will automatically clean the jar, fill the water into the jar and cap the jar, and the manufacturer's job is just to ensure enough quantity of the jar, pure water supply and cap for the machine to operate. The performance of the machine is up to 150 20L big neck threaded jars/h.
အရင်က နည်းပညာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အော်တိုစက်တွေက အလုပ်သမားတွေ အများကြီးလိုအပ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုက နှေးတယ်။ VAQGF 150-L ကတော့ လုံးဝကို ကွာခြားပါတယ်။ သူက သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြည့်ခြင်းနှင့် အဖုံးတပ်ခြင်းတွေကို အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေက ပုလင်းတွေရဲ့ အရည်အသွေး၊ ရေသန့်နဲ့ အဖုံးတွေကိုသာ သေချာစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်။ စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက တစ်နာရီအတွင်း ၂၀ လီတာဆံ့တဲ့ လည်ပင်းထူ ပုလင်းပေါင်း ၁၅၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Simple and easy operation process
VAQGF150-L3in 1 automatic jar filling and capping machine has an extremely intelligent control system. It can be automatically disconnected when something goes wrong and it is absolutely safe for production activities.
The control buttons are used adjust the operating speed of the machine, the PLC touch screen fully displays the operating parameters of the machine so that the operator can monitor and supervise the production process.
You only need to install once then the machine will automatically operate. The operation will be instructed in detail by Viet An skilled technicians when the installation is completed
းရှငျးပွီး လှယျကူတဲ့ လုပျဆောငျပုံ
VAQGF 150-L မှာ အလှန့ကောငျးတဲ့ ထိနျးခြုပျစနဈ ရှိတယျ။ တဈစုံတဈခုမှားယှငျးနရေငျ စကျက အလျုလိုရပျသှားမှာ ဖွဈတယျ။ဒါကွောငျ့ ထုတျလုပျခွငျးအတှကျ လုံခွုံစတေယျ။
ထိနျးခြုပျခလုတျတှကေ စကျရဲ့ အရှိနျကို ထိနျးခြုပျပေးပွီး PLC touch screen က မျောနီတာကို ထိနျးခြုပျနျုငျပွီး ထုတျလုပျုခငျးလုပျငနျးကို အကွံပေးနိုငျတဲ့ စကျရဲ့ သတျမှတျခကျြဘောငျတှကေို ပွသပေးတယျ။
တပျတငျပွီးတာနဲ့ စကျက အျောတို အလုပျလုပျနမှော ဖွဈတယျ။ Viet An ရဲ့ အရညျအခငျြးရှိတဲ့သူတှကေ စကျကိုတပျဆငျပွီးတာနဲ့ လုပျဆောငျပုံတှကေို ညှနျပွပေးမှာ ဖွဈတယျ။
Genuine, high quality machine
Model VAQGF150-L belongs toa3 in 1 automatic jar filling and capping product series supplied by Viet An company to the market. All components constituting the machine are genuine with high durability. The origin of the device is fully and clearly recorded so that customers can check easily.
The machine is manufactured according to ISO 9001: 2015, the most stringent standard in the market.
If customers use properly, regularly clean the machine, perform periodic maintenances, the machine can be used for more than 20 years.
VAQGF 150-L3IN 1 လည်ပင်းထူသော ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် series ကို Viet An မှ ဈေးကွက်မှာ ဖြန့်ချီထားပြီးဖြစ်တယ်။ စက်မှာ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေသာ အသုံးပြုထားတယ်။ စက်ရဲ့မူလအခြေအနေကို သေချာမှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် customer တွေက လေ့လာနိုင်တယ်။
ISO 9001:2015 အရ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဈေးကွက်မှာ အတိကျဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံးသောစက် ဖြစ်ပါတယ်။
Customer တွေက စက်ကို သေချာသန့်ရှင်းပေးပြီး ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုရင် အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
Increasing competitiveness for businesses
The VAQGF150-L machine can replace 3-5 workers. Therefore, on average, you can save from 21 million VND to 35 million VND per month on labor costs. From there, businesses can lower the cost of jars to compete with other businesses while ensuring profit.
In addition, this is the most modern machine line of cleaning, filling and capping technology in 2019, applying the most energy-saving technology in the production process. The machine can operate continuously foralong time This will help businesses have an advantage over other units using the old technology filling line
စီးပွားရေး ပြိုင်ဆိုင်မှု မြင့်တက်ခြင်း
VAQGF 150-L စက်ကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် အလုပ်သမား ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်အထိ လျှော့ချနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်အတွက် တစ်လကို 21 million VND ကနေ 35 million VND အထိ လျှော့ချနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ပုလင်းတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျှော့ချနိုင်ပြီး အခြားစီးပွားတွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် အကျိုးအမြတ်တွေ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီစက်ဟာ 2019 ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော အင်နာဂျီထိန်းသိမ်းတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ သူက အချိန်အကြာကြီး အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကျိုးအမြတ်တွေ အများကြီးရအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
Technical specifications of VAQGF 150-L filling and capping machine for big neck thread jars
(3 in 1 လည်ပင်းထူသောပုလင်းများအား လောင်းဖြည့်ပြီးအဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 L ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
A. VAQGF 150-L3in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine FOR 20-LITER BIG NECK THREAD JARS
(3 in 1 လည်ပင်းထူသောပုလင်းများအား လောင်းဖြည့်ပြီးအဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 L)
Model VAQGF150- L
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 120-150
Extraction head(ထုတ်ယူသောခေါင်း) 1
Capacity (KW) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 2
Pressure (Mpa) (ဖိအား) 0,45-0,6
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 3500x700x1700
B. VAQGF150-320-LITER BIG NECK THREADED JAR FILLING AND CAPPING MACHINE, OPTIONAL STAGES
(3 in 1 လည်ပင်းထူသောပုလင်းများအား လောင်းဖြည့်ပြီးအဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 150 L ၏ ရွေးချယ်စရာအဆင့်များ)
1. Semi- automatic inner and outer jar cleaning, decapping machine BS-1 (တစ်ဝက်အော်တိုအတွင်းအပြင်သန့်ရှင်းပေးပြီးအဖုံးဖြုတ်ပေးသောစက်)
2. Light inspection machine (DJ-100) (အလင်းရောင် စစ်ဆေးခြင်းစက်)
3. Steam Membrane Shrinking Machine for Jars SK-300 (ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အမြှေးပါးရှုံ့သောစက်)
4. Heat membrane shrinking machine SK-300E(အပူဖြင့်အမြှေးပါးရှုံ့သောစက်)
5. Stainless steel conveyor (for jars containing water) CSSG4 (304 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူပေးသော ကိရိယာ)
Hỏi đáp & đánh giá VAQGF 150-L3IN 1 ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်